အသင်းတော် မှ ထုတ်ပယ်ခြင်း နှင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်း . . နှစ်ခြင်းခံ.လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း. .
Murann Ezine is with Ehsehwah Saw and 12 others.
September 20 at 5:44am ·
သင်းအုပ် ဥက္ကဌ အတွင်းရေးမှုး ဘဏ္ဍာရေးမှုး အမျိုးသမီးကျမ်းစာသင်ဆရာမ ကျမ်းစာကျောင်းဆရာ လူငယ်ဆရာ. ဒီကွန်တွေနဲ တယောက်ချင်း အင်တာဗျူးပုံစံ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသမြို့ရွာများက အသင်းတော်များ ကျင့်သုံးစည်းမျဉ်း ဓလေ့ထုံးစံ အကြောင်း ဆွေးနွေးတယ်။
အသင်းသားတစ်ယောက် သူကနှစ်ခြင်းခံပြီး. .ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာမိန်းကလေးနဲ့ living together မိသားစုအိမ်မှာနေတယ်။ စင်ကာပူ အမေရိကား ဆိုရင် အသင်းတော်အတွက် ပြသနာမဟုတ်ပါ။ မြန်မာပြည် ရန်ကုန် မြို့ကြီးက အသင်းတော်အတွက်လဲ ပြသနာမဟုတ်. .ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလာပြီး အတူပူးကပ်ထိုင် နေလဲ ပြသနာမဟုတ်။ လူမြင်မကောင်းအောင် ဘုရားကျောင်ထဲ မြူးနေတဲ့အတွဲလဲ တခါမှမတွေဖူး. .တွေ့ရင်လဲ သဘာပတိက သတိပေးမှာသေချာပါတယ်။
အခု ပြသနာက ဧရာဝတီတိုင်းမြို့ပေါ် နှစ်ခြင်းအသင်းတော် အထူးသဖြင့် ကရင်များတဲ့အသင်းတော်တွေမှာ living together ကြားတာနဲ့ နှစ်ခြင်းခံပြီးမှ လက်ထပ်ဖို့ တိုက်တွန်းတာ လက်မခံရင် အသင်းသားအဖြစ်က ရပ်ဆိုင်းဖို့ စည်ဝေးပြီး ဆုံးဖြတ်တယ်။ မယုံကြည်သူနဲ့ တရားရုံးမှာလက်ထပ်ရင် လဲ အသင်းသားအဖြစ်က ရပ်စဲခံရတယ်။ တရားရုံးတွေကလဲ ယိုင်လဲနေတော့ ကျမမှတ်ပုံတင် မရှိပါ ကျမ်းကျိန်ပြီး ၂ယောက်စလုံး ဘာသာကို ဗုဒ္ဓ သို့မဟုတ် ခရစ်ယန် ကျန်းကျိန် လက်ထပ်ပေးတယ်။ နောက်ဆုံး ထုတ်ထားတဲ့ တလင်တမယား ဥပဒေအရ လက်ထပ်မဲ့၂ဦး မှတ်ပုံတင်ထဲမှာ ဘာသာမတူရင် ဥပဒေအရ လက်ထပ်ပေးလို့မရပါ။ ယိုင်လဲနေတဲ့ တရားရုံးမှာပဲ လက်တလုံးခြား လက်ထပ်ရင်တော့ ရတယ်ပဲဆိုပါတော့။
ဥပဒေ နည်းဥပဒေအရ ဆိုရင် ဘာသာပြောင်းခြင်း လုပ်ထုံးအရ ပြောင်းပြီး မှတ်ပုံတင်မှာ လဲ ဘာသာပြောင်းရတယ်။ ပြီးမှ တရားရုံးက ဥပဒေအတိုင်း လက်ထပ်ပေးတယ်။ ဒါလောက်ခက်ခဲတော့ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးစံ ပုဆိုးတန်းတင် living together ကလေးရတယ်. . ရပ်ရွာက လင်မယားလို့ အသိအမှတ်ပြု. ဒီလိုပဲလေ။ .. အမွေ ရော်ကြေးတွေ ဖြစ်လာတော့ အရမ်းရှုပ်တတ်တယ်။ မယားကြီး မယားငယ် တရားတဘောင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။.
ခရစ်ယန်ကတော့ ရှင်းတယ်။ မယုံကြည်သူနဲ့ living together နေရင် အသင်းသားကို မယုံကြည်သူ ဗတ္တိဇံခံဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။ ဧဝံဂေလိလုပ်တယ်။ လက်ခံရင် ယုံကြည်သူကို အသင်းသားအဖြစ်က ရပ်စဲတယ်။ လက်မခံလဲ ရပ်စဲတယ်။
မယုံကြည်သူကို ၃ရက် သင်တန်းပေးပြီး နှစ်ခြင်းပေးတယ်။ နောက်တော့ အသင်းသားက နောင်တရကြောင်း living together မနေတော့လို့ တောင်းပန်ပြီး အသင်းတော်က အသင်းသားအဖြစ်သို့ ပြန်လည် လက်ခံပွဲ လုပ်တယ်။.
ပြီးမှ ၂ယောက်စလုံးကို လင်မယားသင်တန်း ၃ရက်ထပ်ပေးပြီး လက်တင်ဆရာက အသင်းတော် မှာ လက်ထပ်ပေးတယ်။
စင်ကာပူ Hope Singapore Church ကတော့ နှစ်ခြင်းအတွက် ၆လ.လက်ထပ်ခြင်အတွက် ၆လ သင်တန်းပေးတယ်။ နှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ် က အသင်းတော်တွေကို (Power) ဒေသအသင်းတော် နည်းဥပဒေအတိုင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်။ ရိုမင်ကာသိုလစ်.အင်္ဂလိကန် တွေကတော့ ဗဟိုစည်းမျဉ်းလိုက်နာရတယ်။
ထုတ်ပယ်ခြင်းကတော့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုး. ဥပမာ မိစ္ဆာာဆရာ နောင်တမရတဲ့ ကိုကျော်စိုး လူကုန်ကူးမှု စွပ်စွဲ တရားစွဲခံထားသူ။ သာသနာညှိုးနွမ်းစေတဲ့ အဖွဲ့စည်းနောက် လိုက်သူ ကိုတော့ ထုတ်ပယ်ပါတယ်။
ခိုးဆိုးလုယက်သောက်စား မူးရမ်းကား မုဒိမ်းကောင် တွေကိုတော့ မြို့ပေါ်အသင်းတော်တွေက မထုတ်ပေမဲ့ ရွာ အသင်းတော်တွေက ထုတ်ပယ်လေ့ရှိပါတယ်။ လုံးဝ ဘုရားကျောင်း အလာမခံပါ။
ရှုပ်ပါတယ်။ လူပေါင်းများစွာကို ယုံကြည်စေ နှစ်ခြင်းပေးနေတဲ့ ဆရာတွေနဲ့ ဆုံလို့ ဆွေးနွေးတော့ ကျွန်တော် ကျမ " မှတ်ပုံတင်မှာ မြန်မာ ဗုဒ္ဓပဲ။ ပြောင်းလို့မရပါ။ ဒါပေမဲ့ နှလုံးသားမှာ ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်။ ခရစ်တော်က ကျနော် ကျမတို့ နှလုံးသား ယုံကြည်ခြင်းပဲကြည့်တယ်". . ပြောပါတယ်။ ကျမ်းစာမှာတော့ ဓမ္မဟောင်းမှာ ထမ်းပိုးမတူရင် အသေသတ်တဲ့ အထိပြင်းထန်ပေမဲ့ ဓမ္မသစ်မှာတော့ တပါးအမျိုးသားနဲ့ လက်ထပ်တာ ယုံကြည်သူဖြစ်စေဖို့ပဲ တိုက်တွန်းခြင်း နှိုးဆော် ဆွဲဆောင် မေတ္တာပြခြင်း ပဲ တွေ့ရပါတယ်။
ပုဆိုးတန်းတင် လင်မယား လုပ်နေကြရတဲ့ living together မြန်မာပြည်ပါ။ နောက်ဆုံးသောကာလ အလွန် နီးလာပြီပဲ။ တူညီတဲ့ ထမ်းပိုးဖြစ်သွားအောင် လူငယ်အတွဲတွေကို ကူညီမစ ပံ့ပိုးကြပါ။ ဘုရားသခင် နှစ်သက်စေကြပါ။
ဘုရားသခင်နှစ်သက်သည် က၂း၁၈၊ မ၁၉း၅၊ ဧ၅း၃၀၊ ယော၂း၁၊
မယုံကြည်သူများနှင့်လက်ထပ်ခြင်း တားမြစ်သည်.. ထွ၃၄း၁၅၊ တရား၇း၃၊ ၁ကော၇း၁၂၊ ၂ကော၆း၁၄၊
အိမ်ထောင်ပြုခြင်ရည်ရွယ်ချက်များ. .က၂း၁၈၊ သု၅း၁၅၊ က၁း၂၇(သားသမီး)၊ ၁တိ၅း၁၄၊ ၁ကော၇း၂
အိမ်ထောင်ဖက်တို၏တာဝန်များ..ဧ၅း၂၂-၂၅၊ ကော၃း၁၈-၁၉၊ ၁ပေ၃း၁-၇
ပုံ. .ပုသိမ်မြေပြန့်သာသနာ လက်ထပ်အခမ်းအနား. .